Ekuphileni, abantu abagcini nje akhona futhi nihlanganyele. Ngamanye amazwi, bekhulumisana, bonisa umuzwa othile, ngendlela ethile lapho uxoxela abanye, njll Uma lokhu ukuphila komphakathi wonke sihlanganise, khona-ke kungenziwa ngokuthi izwi elilodwa - ngokoqobo ngokwengqondo. Kuyinto lokhu ngokoqobo ngokwengqondo izifundo Psychology nomphakathi.
Zonke ulwazi possessed abantu kohlaka Psychology nomphakathi, ukuze kube lula systematized. Ngakho, lolu cwaningo lunikeza ukuqonda yesayensi ahlukahlukene imihlola zenhlalo-ezingokwengqondo, imithetho, izimbangela zazo, esebenza ngayo. Ngaphezu kwalokho, Psychology yezenhlalakahle uhlukaniswe imikhakha, okuyinto kufundvwe ngokujulile. ukubukwa Jikelele kokuqondisa eziqhubekayo Psychology nomphakathi. Izindlela ukusetshenziswa nakho nobudlelwano zomphakathi. Endaweni yokuqala phakathi ubuhlobo nomphakathi nezingokwengqondo kuwufanele Psychology yezenhlalakahle amaqembu, kanye ubudlelwane obufanele. Futhi okwesibili Psychology yezenhlalakahle study zonke asele izinqubo kwezenhlalo kanye izenzakalo, ezifana, isibonelo, kungenzeka ukuthi isimo sabantu, imizwa yabo, "isimo" obhekene naso e eqenjini elithile.
Psychology Social has into yayo, okungukuthi, lokho yezinhloso wesenzo. Ngakho, into lokukhonza njengomdala amaqembu kanye izinhlangano zabantu kanye ehlukile ubuntu ngabanye. Sami imihlola ngokwengqondo social ihlukaniswa ngokweminyaka izimiso eziyisisekelo sokusebenzisana elilodwa noma kwenye, ngokuvamile ezahlukene ngokuphelele, imiphakathi noma izinhlangano. Ngakho, izenzakalo zenhlalo-ngokwengqondo ezenzekayo ohlelweni generality ehlelekile, okungukuthi, amancane namaqembu amakhulu. Ngo elikhulu iqembu yezenhlalakahle Psychology sivezwe kula amazwi anjengokuthi "Psychology isizwe", "psychology yenkolo", "ikilasi Psychology" futhi "Psychology ezombusazwe." Zonke imiqondo lawa okungenani ababukeka bheka esiyingqayizivele, kodwa eqinisweni kokuqukethwe kwabo ebudisi khulu. Ngisho nanamuhla ososayensi oyingqayizivele ukuchaza isimangaliso esithile.
Kepha amaqembu amancane, kukhona abakhona imiphumela zenhlalo nezengqondo ubudlelwane abantu eziningana noma amaqembu lonke. Nokho, kufanele sikhumbule ukuthi kulawo maqembu kungenzeka loxhumana abaseduze phakathi bonke abantu kanye nabantu. Yegatsha kwengqondo yezenhlalakahle esithinta ubudlelwano, izinqubo kanye izenzakalo ngamaqembu amancane ayebizwa ngokuthi i-Psychology ngamaqembu amancane. Ngaphezu imiphakathi zihlelekile, njengoba kushiwo ngenhla, kukhona umphakathi angahlelekile. Ukuze miphakathi akunakubangelwa isixuku angesabi wavela noma omunye sabantu. ga tetenhlalo letibalulekile nezingokwengqondo okuyinto angesabi ziphakame labantfu abizwa ngokuthi - massiveness, kodwa izimpendulo kokuziphatha ukuthi kuyizinto zabantu esixukwini - zemvelo. Kule ndaba, kukhona izindawo eziningana zomphakathi Psychology: Psychology ukwethuka besabe, isixuku Psychology, Psychology ze, ukukhangisa Psychology, Psychology amahemuhemu kanye nabanye. Wona nehlumela esigabeni kwengqondo nomphakathi ukuthi etadisha izinqubo kanye izenzakalo, ebizwa ngokuthi i-Psychology Isigaba sezinhlamvu mass izenzakalo zenhlalo-ngokwengqondo.
Eceleni kudingeka bathi into eyinhloko cwaningo kwengqondo yezenhlalakahle ubuntu. Kufanele kuqashelwe ukuthi umuntu ngumkhuba lapho ngamunye, futhi akuhlobene iqembu kanye nobudlelwane ekuchumana.
Nokho, ku-ubuntu ayo kungaba ngaphansi kwethonya nobudlelwane bokuhlalisana ishintshile, ukuthuthela noma yiliphi elinye ilizwe. Lezi zinguquko netinchubo ukuhlola igatsha ahlukene kwengqondo kwezenhlalo, igama okuyinto - social Psychology ubuntu.
Indlela usetha irekhodi emhlabeni wonke ebambe umoya komuntu? irekhodi Guinness ngokubamba umoya komuntu
Ngizoxoxa mayelana nendlela ukususa amathebhu kusuka ngaphakathi kwethanga